Inona ny paikady, tetika ary fantsona tokony hifantohan'ny mpivarotra amin'ny 2017 | Martech Zone
Alatsinainy Janoary 16, 2017 Asabotsy 13 Febroary 2021 Douglas Karr
Manantena aho ny hamaky amin'ny fanehoan-kevitra na eo amin'ny fiarahamonina misy anao izay ifantohanao amin'ny taona 2017. Amin'ny maha maso ivoho anay, voasintona amin'ny lalana maro izahay fa ny fifantohanay amin'ny mpanjifa kosa dia ny manatsara hatrany ny volan'ny marketing ary manome lanja ao ny vokatra sy serivisy nampiasain'izy ireo. Ny tombony azonay amin'ny maha-mpitory sy ny masoivoho dia ny fahafahanay mitsapa ny zavatra mamirapiratra hampihena ny risika amin'ny ankapobeny. Ny fananganana haingana ny teknolojia marketing mahasoa… fa rehefa misy dikany ihany.
Mba hanampiana anao hampihena ny fifantohanao dia jereo ny sary vaovao MDG Advertising, Fanapahan-kevitra 7 Tokony horaisin'ny mpivarotra tsirairay amin'ny 2017. Manasongadina ireo hevi-dehibe sy fomba fiasa izay tokony hametraka anao tsara amin'ny taona ho avy.
Izahay dia nijery herintaona hafa ny amin'ireo vinavinantsika izay tena sahirana. Tsy nanana ny teti-bola na ny ekipa hahatsapany tanteraka ny fahafaha-manao marketing azy ireo. Vokatr'izany, ny ankamaroan'ny asa dia nampiharina tamin'izy ireo nahay na inona no azon'izy ireo atao manam-bola mitazona ny lohany ambonin'ny rano. Ny metrika lehibe iray hitanay fa tsy hita isaky ny vinavina dia ny fiandrasana izay azy ireo ny fampiasam-bola amin'ny marketing dia tokony ho isan-jaton'ny vola miditra amin'ny ankapobeny. Fitsipi-pifehezana lehibe hampiasana vola amin'ny orinasanao izao fa tsy taty aoriana, mba hahafahanao manohy manafaingana ny fitomboanao.
Paikady ara-barotra, taktika na fantsona hifantohana amin'ny 2017
Olona tsirairay fa tsy fantsona: ny 25% -n'ny mpiasa orinasa ihany no manana paikady feno lakandranon-tserasera miompana amin'ny fifantohana amin'ny paikadinao amin'ny dian'ny mpanjifa tsirairay sy ny kaontinao dia hanampy anao hanatsara sy hampifangaro ireo paikadinao omni-channel. Fivarotana miorina amin'ny kaonty (ABM) manohy mitondra ny maro amin'ireo paikady ireo.
automatique: 94% amin'ireo mpivarotra izay nanao automatique ny sasany amin'ireo fandaharan'izy ireo no nilaza fa nanatsara ny fahombiazan'ny orinasan'izy ireo Raha mihasarotra kokoa ny fantsona sy ny paikady, dia matetika ny loharanom-barotra amin'ny orinasa no miha-vitsy. Ny hany safidy ho an'ny mpivarotra dia ny mijery teknolojia marketing hitantanana sy hanatsara ny paikadim-barotra.
Content: 58% amin'ireo mpivarotra # B2B mahomby indrindra no manana paikady marketing atiny voarakitra an-tsoratra Ny orinasa dia mamokatra atiny iray tsy misy ampiasaina, tsy voamariky, ary ambany volo isan'andro. Tena mamporisika anao izahay hampivelatra a tranomboky atiny fomba fananganana atiny.
Fidiovana data: 24% ny angon-drakitra ho an'ny mpivarotra antsinjarany dia tsy marim-pototra, amin'ny salanisa Raha toa ka lasa andrin'ny mpanjifa sy ny orinasa ny fanatontosana azy sy ny traikefa ho an'ny mpanjifa an-tserasera sy ivelan'ny Internet, dia ho lasa tsilo eo amin'ny ankamaroan'ny orinasa ny tahiry ratsy. Izany no antony sehatra data ho an'ny mpanjifa dia mitombo amin'ny fananganana.
Video: Nisy fiakarana 20% amin'ny habetsaky ny horonantsary an-tserasera zahana tamin'ny taona 2016. Ny horonan-tsary dia nanjary loharanom-baovao ankafizin'ny mpanjifa maro. Mianatra ny tadin'ny horonantsary - toy ny fomba maharary feo mora mihoatra ny horonan-tsary ratsy - ilaina toy ny jiro, scripting ary ny halavan'ny video ihany koa.
Security: 29% amin'ireo mpanjifa rehetra no misoroka ny hetsika an-tserasera noho ny olana ara-piarovana dia ny fahatokisana no iray amin'ireo sakana lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa na orinasa mahita anao an-tserasera ary hivadika ho lasa mpanjifa. antoka ny azo antoka ny angona ary ilaina ny mampita ireo dingana ataonao hiarovana ny atiny.
Teknolojia vaovao: Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia vinavinaina hampiakatra avo roa heny ny tahan'ny fitomboan'ny toekarena amin'ny 2035 ary vinavinaina hitombo in-61 ny fifamoivoizana an-tserasera Virtual amin'ny taona 2020. Ireo teknolojia ireo dia manana herijika mahomby amin'ny fanatsarana ny dian'ny mpanjifa sy hanatsara ny traikefan'ny mpanjifa.
Tags: abmmarketing miorina amin'ny kaontyautomatiquemarketing amin'ny fantsonatranomboky atinyContent Marketingangona ho an'ny mpanjifafidiovana datateknolojia mipoitraautomation marketingsecuritylahatsaryvideo marketing
Inona no atao hoe Platform Demand-Side (DSP)?